Rockets namboarina - Ikkaro
Manokatra sehatra iray izahay hiresahana tontolo vaovao, dia ireo balafomanga namboarina tao an-trano.
Misidina amin'ny Internet no nahitako karazana maro balafomanga namboarina, maro be tsotra sy marani-tsaina; balafomanga vita amin'ny afovoan-drano sy tavoahangy plastika ary zavatra hafa be pitsiny kokoa izay ilana teknolojia bebe kokoa.
Manana safidy tsotra sy tsotra mamorona izay ampianarinay ny ankizy izahay. Ianao ve mila rocket namboarina ho an'ny ankizy? Ary inona koa no mandeha? Ary inona no azon'izy ireo atao (miaraka amin'ny fanaraha-masonao mazava ho azy? Eny, aza adino ireo rohy ao amin'ilay faritra.
Mitady zavatra matotra kokoa ianao ... eny, efa ananantsika ireo roketa rano. Fantatrao ve fa afaka mahatratra 500 metatra ny haavony?
Misy balafomanga DIY izay tsy tokony hialona ny iray amin'ny fanamboarana indostrialy. Azontsika atao ny mahita ny fomba fanaovana solika balafomanga. Lohahevitra tena mahaliana, na dia tsy maintsy karakaraina tsara aza izy ireo satria mety ho lohahevitra mampidi-doza.
Tiako ny manipy zavatra eny amin'ny habakabaka ary tiako ny manao fampianarana an-dàlana.
Ny balafomanga dia fanehoana ny haitao avo lenta. Mahita tetik'asa izay tian'ny olona
Heveriko fa fizarana tsara misy zavatra maro hotadiavina ...
En ny fantsona youtube an'ny alikaola, afaka mahita fanandramana maromaro notanterahina tamin'ny alikaola isika.
Tsotra ity roketa toaka nahasarika ny saiko izany. Ao amin'ny tsipika rocket tsotra be hatao toy ny rocket match na ilay ho an'ny kitapo dite. Izy ireo dia lalao azontsika lalaovina amin'ireo zanatsika, manazava azy ireo hatrany ny loza ateraky ny afo sy ny fandraisana ny fepetra ilaina. Aza atao amin'izy ireo izany raha mieritreritra ianao fa hanandrana izany rehefa irery na miaraka amin'ny namany. Fantatrao tsara kokoa ny zanakao noho ny olon-drehetra. Ny tombony azo amin'ilay hetsika dia ny fitadiavana ny fahalianana, izany fahagagana izany, izay mahatonga azy ireo haniry hanohy hianatra sy hanao fanandramana.
Amin'ity indray mitoraka ity dia mila fotsiny isika
Alikaola mandoro, ilay karazana amidiny any amin'ny magazay lehibe izay manga miloko
Araraka ao anaty tavoahangy ny alikaola ary avelantsika hofoanana. Avy eo apetrantsika eo amin'ny toerany izany ary entintsika manakaiky ny lavaka ao amin'ny plug ny hazavana. Ka ny sisa, ny alikaola kely sisa tavela ao anaty rindrina dia handrehitra sy hanosika ny tavoahangy.
Avelako horonan-tsary roa ianao.
Rocket miaraka amin'ny kitapo dite
Azontsika atao ny milaza fa io no rokety tsotra indrindra eto an-tany. Ny taratasy misy kitapo dite fotsiny no ilainao ... Tohizo ny famakiana
Baibola vita an-trano miaraka amin'ny afokasoka
Handeha hahita balafomanga lalao isika. Ireo dia balafomanga propulsion tsotra vita amin'ny ... Tohizo ny famakiana